Friday July 20, 2018 - 16:41:43 in Wararka by Super Admin
Intii uu socday duullaankii eey Ethiopia ku qabsatay Soomaaliya 12 sano ka hor Ummada qofba si ayuu uga falceliya gaar ahaan magaaladii aan ku noolaa dhammaan dadku waxay ahaayeen kuwa laabkacsan, sida ka muuqatay waxay ku jireen olole dagaal waxayna
Intii uu socday duullaankii eey Ethiopia ku qabsatay Soomaaliya 12 sano ka hor Ummada qofba si ayuu uga falceliya gaar ahaan magaaladii aan ku noolaa dhammaan dadku waxay ahaayeen kuwa laabkacsan, sida ka muuqatay waxay ku jireen olole dagaal waxayna ka mideysanayen in Ethiopia la iska dhiciyo.
Khamiis ama jimco kasta waxa la qaban jiray isu soobaxyo lagu qorayay dhalinyaro dagaalanta intaas waxa garab socday banaanbaxyo yar yar oo ay xaafaduhu sameysan jireen iyago uga goll lahaa iney u duceeyaan xoogagii dulmanaa ee lagu soo duulay islamarkaasna habaaraan ciidamada shiisheeye ee nagu soo duulay.
Habeen kamid ah waayadaas waxaan ka qeyb galay isu soo bax yar oo ey soo agaasimeen haweenka iyo dhalinyarada xaafadda waxaan xasuustaa in la shiday dab laguna dhawaaqayay erayo hal ku dhig ah oo lagu celcelinay in kasto aanan si rasmi ah hadda uu xasuusanin erayadaas lakiin waxaa lagu habaarayay ciidamada Kufaarta Ethiopia ,babeenkaas taariikhiga ah waxaa qalbigeyga kula suntan Haweeney kamid ah dadkii xaafadda kuwii ugu caansanaa ee hor boodayay iso soo baxaas.
waxaan sigaara ugu xasuusta iney ka dhex muuqatay dadka isku soo baxya sameynay, waxaa si aad ah uga muuqatay qiiro isoo jiidato taasi oo sabab u noqotay inaan habeen kaas ku suntado Maama Faadimo waa jilaha qisada aan idin kaga sheekaynayo oo sy lama huraan tahay inaad wax ku dhisataan.
Waxay maalmuhu isi soo duubaan qalbigeyguna u diiwan galiyo shucuurta iyo dareenka bulshada waxaa lasoo gaaray goortii lasoo jebiyay xoogagii wax iska caabinta oo galab Khamiis ah soo galay magaaladeena iyagoo soo jabay waxaan xasuustaa in askarta iyo baaburtoodu iyagoo boor badan ay u gudbayeen xero ciidan oo ku tiilay dhabarka danbe ee xaafadeenna.
Isla habeenimo ciidamadii soo jabay way ka gudbeen magaalada waxayna afka saareen dhanka bari dadka deeganka ayaa iyaguna badankood ka qaxay magaalada madaama la filayay in ciidamo cadaw ah ay soo galayaan dhulka lagana baqayay in ay xasuuq ka geystaan magaaladeena.
Subixii xigay aniga iyo wiil ila dhashay ayaa ku soo laabanay xaafada waxaana ugu nimid wiil kale oo isagu habeenkaas xaafadda ku hoyday.
inagoo dhex joogna xaafadda oo haawaneysa walina aysan soo gaarin cadawgii shisheeye ee la filayay iney subaxaas soo galaan magaalada ayaan hal mar ah aragnay Gaari Jeemis ah iyo Uuraal ay wateen maleeshiyaad soomaali ah oo la socday ciidamada Ethiopia ee na qabsaday.
Waxay ahayd maalin kamid ah maalmihii iigu cabsida badnaa cimrigeyga, waxaana aniga iyo walaalkey ku dhumanay meel aan sidas uga fogeeyn laamiga oo ey labadiisa dhinac ku lugeynayeen askar tuuteysan oo madmadow, sidoo kale waxaa dhex socday gawaari Uuraalo ah oo jiidayay wax laba lugood leh.
Waad qiyaasi kartaa cadaw shisheeye oo kaa itaal roonaaday islamarkaasna soo gaalay maagaaladi laf dhabarka u ahayd xoogagii isku dayay iney iska caabiyaan, lakin markaan wax weyn baa is bedelay;
Intaanan qof kale arkin waxan arkay maamo faadimo Faadimo oo taagan Laamiga dhinaciisa isla markaasna Gacanta u haatineysa ciidamadii soo duuley. Aad baan runtii ula yaabay, xasuusnoow xaafadu waa cidlo oo waa laga kala qaxay aniga iyo walaalkeyna waxaan ku dhuumaneynaa geedo hoostood.
lakiin Magaaladaan Maama Faadimo kaliya ma ahane ciidamada cadawga ah ee Ethiopia si aad ah ayaa looga soo dhaweeyay, waxaana soo dhoweyntaas lagu xasuustaa rag nool iyo kuwa naga hooseeya intaba. Maalmo kadiba maamo faadimo iyo islaamo kale oo aan hore u lahayn wax ganacsi ah waxay furteen Maqaayado shaaha lagu kariyo waxaana si aad ah wax uga gadan jiray ciidamo Ethiopian ah oo degay xeradii ku tiillay xaafadda.
Hadaba qisadaan waxan soo xasuustay kadib mar kaan dhageystay Hadalkii Abey Axmed ee oranaya in "Somalia iyo Ethopia la isku darayo oo ey noqonayaan hal waddan".
Ethiopianku waxay baabi'iyeen qoysas dhameys tiran, waxay burburiyeen hanti farabadan waxayna nagu reebeen xasuus xanuun badan oo aan marnaba quluubta ka go'eey sidaas darteed suurta gal noo ma ahan, mana nihin dad wax isku darsan kara.
Ma jirto baahi nagu qasbeysa inaan Ethiopia oo 100 Milyan ah dhul la wadaagnno, taariikhda Mucaasir ka ahna ma jiraan wax midoow ah oo dhex maray wadamo aan diin, dad iyo dhaqan midkoodna wadaagin bal waxaan aragnaa dad isku jinsi ah oo waligood hal wadan ahaa oo hada kala go'aya. Runtii taasi waxay nagu reebi doontaa cirib xumo aan laga soo kabsan.
Hadaan usoo daadago hadafka aan qisadaan u qoray kadib markaan isweydiiyay maxay dadka Somaliyeed ku falcelin karaan? ayaan jeceystay inaan idin sheego iney jiraan dad badan oo aan lagu xisaabtami karin.
Dad badan oo laga yaabo iney kula qiiroodaan ayaad dhinaca kale ka arkeysaa maalinta aad ugu baahida badantahay. Waxaa nasiib xumo ah in dad badan oo kasoo qeyb qaatay duulaankii wax iska dhicinta ee Ethiopianka la lagalay 12 sano ka hor iney maanta Ethiopia ku saf yihiin, taas oo qiyaano ku ah dhiiga shuhadadii ey kasoo garab dagaalameen kuna baxay gacanta cadawga.
kuwa laga yaabo inuu qalbigooda ku jiro kacdoon iyo wax yaabaha la hal maala waxaa lama huraan iney indhasoo jeeda ku eegaan taariikhdii lasoo maray, iney ka kacaan hurdada isla markaasna eeysan ku hungoobin baryaha hore ee laab lakaca.
Waxyaabaha muhiimka u ah inaan cashiradeena ka qaadato waxaa kamid ah kacdoonka wadaniga ah ee ONLF oo illaa iyo hadda aan mira macaan dhalin, taas oo ka dhigan in wadaniyadu eysan xiligaan munaasib ahayn, madaama eysan dhidibo adag ku taagneyn sanado kadibna dad badan ey dhabarka ka tuurayaan iyagoo ku faanaya iney ETHIOPIAN yihiin.
waxaa kaloo lama huraan ah inaad ku xisaabtanto galaan galka ey Ethipiopia ku yeelatay dadka Somaliyeed, oo ey jiraan dad diirka Somali ka ah lakiin qalbiga Tigreey ka ah sidoo kale Maamul goboleedyaduna ey hada u kala firxanayaan taas oo ka dhigan qofkii aaminsan Federalka inuu isaguna uu halkaas ku ba'ay.
Hadaba aqristow maxaa kaaga aadan haddii Ethiopianka iyo daba dhilifyadoodu iclamiyaan iney Ethiopia somalia qaadatay?.
Ethiopia waxay Muslimiinta bariga Africa ka heysataa dhul farabadan waxaana waajib diini ah nagu ah inaan soo furano dadka iyo dhulka naga maqan, Sidaas darteed Haku xisaabtamin oo hankaaga haku xirin Killo mitaraatka loo bixiyay Somalia oo ah qeyb yar oo kamid ah Emaradihii Islaamiga ahaa ee Bariga Africa. Waxaa lama huraan ah inaan u guntano Jihaad aan uga gudbeyno xuduud beenadyada nagu xeeran, sidoo kale inaan jiilasha danbe u diyaarino iney so ceshtaan dhulkaas oo eeynan u dagin sidi inaga naloo dagay.
Waxaan idinkaga digayaa inaad meereysataan miisaska wada hadalada iyo isu imatinada lagu qiimeynayo heerka damaciina iyo sidaad quus u joogtaan. Niyada ku haya walaaleheen reer Filisdiin iyo sida loo dhagray. hana aaminina Odayaasha caloolaha kuusan ee u Allah ku riday duliga kana indha saabay dariikha ciziga iyo Sharafka loo maro.
Ugu danbeyn, Maadama guul darada lagu qeexo inaad ka tanasusho hadafkaaga iyo mabda'aaga waxaan kaaga digayaa inaad ka tanasusho mabda' laga yaabo inaad u marto jariimoyin xanuun badan lakiin hadii aad ku samarto aad heleyso Cizi iyo Sharaf.
Ha iloobin inuu dariikha ciziga uu dheeryahay isla markaasna aad u qatar iyo mushkilo badan yahay lakiin eey hubaal tahay hadii aad ku sabarto inaan hananeyso cizigaas.
W/ Q Hilaal Colaad.